Post coital tear – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ံလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် မိန်းမကိုယ် ဆုတ်ပြဲဒဏ်ရာ
Post coital tearဆိုတာ ဘာပါလိမ့် ?
ဖိုနဲ့မ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်မှာ မိန်းမကိုယ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်… ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီး
တစ်ယောက်ဟာ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ရာ ရှားပါတယ်… သို့သော် တခါတရံမှာ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ဆုတ်ပြဲဒဏ်ရာရပြီး မိန်းမကိုယ်မှ သွေးနီရဲရဲ ဆင်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ သွေးဆင်းများပြီး ဖြူဖျော့လာခြင်း၊ရင်တုန်ခြင်းတွေအပြင် အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်ခြင်း စတာတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဒီလို ကြုံရတဲ့အခါမှာ နီးစပ်ရာဆေးရုံကို အမြန်သွားရောက်ပြသရပါမယ်…
ဒီလိုမိန်းမကိုယ် ဆုတ်ပြဲခြင်းဟာ …
– လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အမျိးသားအင်္ဂါကို အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲ ထည့်၍ ဖြစ်စေ၊ fingers လက်ချောင်း (သို့) toys ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်ခုခုထည့်၍ဖြစ်စေ ၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းထိုးသွင်းကာ သာယာမှု ပိုရအောင် ပြုလုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ်… ဒီအခါမှာ အချစ်ကြမ်းသူတို့အတွက် သတိထားစရာကတော့ မတော်တဆ မိန်းမကိုယ် ဆုတ်ပြဲသွားနိုင်ခြင်းပါ…
– ပထမဆုံးအကြိမ်းလိင်ဆက်ဆံတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အပျိုမှေးလို့ ခေါ်တဲ့ hymen ပေါက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း သွေးထွက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…ဒီလိုသွေးထွက်ခြင်းဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်… တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ အပျိုမှေးပါးတာကြောင့် ငယ်စဉ် ခုန်ပေါက်ဆော့ကစားတုန်းကရင် အပျိုမှေးမရှိတော့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဆုတ်ပြဲခြင်း (သို့) သွေးထွက်ခြင်း မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဆိုတာ သေချာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်..
– သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေ … လတ်တလော နို့တိုက်နေရတဲ့ မိခင်တွေမှာ.. estrogen ခေါ် ဓာတ်တစ်မျိုးနည်းပါးနေတဲ့အတွက် secretion နည်းတာ၊ခြောက်သွေ့တာတွေကြောင့် ဆုတ်ပြဲတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ယခင် တင်ပဆုံရိုးကျိုးထားဖူးသူ ခွဲစိတ်မှုခံယူထားဖူးသူတွေ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသမှု ခံယူထားဖူးသူတွေမှာလဲ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်…
ဒါပြင်.. အမျိုးသားအင်္ဂါ ကြီးမားလွန်းခြင်း၊ ကာမဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံပေါ်လိုက်ပြီးလည်း ဆုတ်ပြဲခြင်းတွေ ကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်….
မိန်းမကိုယ်ဆုတ်ပြဲခြင်းဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ နံရံတွေနဲ့ posterior fornix မှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
ဒီလိုဆုတ်ပြဲခြင်းတွေဟာ တခါတရံမှာ သွေးထွက်လွန်ခြင်းတွေကြောင့် မေ့ဆေးသုံးကာ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေထိ ပြုလုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်… ဒီလို မိန်းမကိုယ်ဆုတ်ပြဲပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အချိန်ကာလ ခြောက်ပတ် လောက်ထိ လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး…မတော်လို့ ဆက်ဆံမိတဲ့အခါမှာ.. နာကျင်ခြင်၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမရခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်အောက်ပိုင်းနှင့်တဝိုက် ကြာရှည်စွာ နာကျင်ခြင်း တွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဒီလို ကြုံတွေရပြီးပါက ဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြသခြင်း၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ဆိုင်သော ရောဂါများ ရှိမရှိ၊ တခြားနောက်ဆက်တွဲပြသနာများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းများပြလုပ်ရပါမယ်…
အချစ်ကြီးတာဟာ ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့် အချစ်ကြမ်းတာ တခါတရံမှာ အခက်ကြုံရတတ်ကြောင်း သတိချက်ဖို့ရာ တိုက်တွန်းလျက်….